Hafatra Fohy amin’ny Video momba ny Eo Ambany Fahefana - Cloud Library
Accueil - Video - Hafatra Fohy amin’ny Video momba ny Eo Ambany Fahefana
Mandefa Hafatra amin’ny Video
Eo ambany elatry ny Tsitoha dia misy fahafahana, famatsiana ary fiarovana. Ny mampalahelo dia maro no tsy mahatakatra ny fomba fitadiavana ity fierena na toerana mangina ity. Ka voafitaka indray aza ka lasa mino fa ny fahafahana marina sy maharitra dia hita any ivelan’ny fahefan’Andriamanitra.
Vakian’i John Bevere bantsilana ao amin’ny boky Eo Ambany Fahefana(Under Cover) ny fomba fiasa sarom-pantarina ampiasain’ny fahavalo izay mahatonga antsika ho raraka amin’ny fahafantarana mazava tsara sy ny fifandraisana amin’ny fahefan’Andriamanitra. Miaraka amin’ny ohatra mazava be sy fototra ara-Baiboly matanjaka be no ampahatsiahivan’ity hafatra ity antsika fa ny Fanjakan’Andriamanitra dia fanjakana anapahan’ny Mpanjaka, ary ao dia misy rafitra sy fahefana.
Rehefa mankamamy ny fahamarinan’ny Tenin’Andriamanitra ianao dia ho fantatrao ny fomba fihetsika hatao eo anatrehan’ny fomba fitondrana anao mety sy tsy mety. Ho hitanao ny maha samy hafa ny atao hoe manaiky ara-Baiboly sy ny mankatò, ary ho ianao dia hitombo amin’ny fahatakarana ny tanjon’Andriamanitra amin’ny resaka fahefana. Ity hafatra ity dia hametraka anao ao amin’ny fandehanana ao amin’ny tena toetra feno.